Uzothatha isithembu izinsuku zilandelana
UMnuz Khumbulani “Mabalengwe” Ntombela, ongumelaphi wendabuko eMelmoth, kusasa ngeSonto ulobole uNksz Zandile Dube waKwaMaphumulo, maqede wambesa umndeni wakhe. NgoMsombuluko (namhlanje) ekuseni uzovukela kubo kaNksz Mabusi Chili waseXopo, nakhona uzofika alobole bese embesa umndeni wonke.
Bongiwe Zuma | April 5, 2021
UZOTHATHA amakhosikazi amabili izinsuku zilandela ozimisele ngokushada nawo ngosuku olufanayo maduze.
UNtombela uthi inhloso yalokhu akwenzayo wukuthi ufuna ukuqinisekisa izintokazi ukuthi uyazithanda futhi uzimisele ngazo ngokulinganayo.
"Nangelanga lomshado kobe kuwusuku olulodwa njengoba ngenza nje, kuyomele ngibashade kanyekanye. Angikufihlile ukuthi ngithandana nabo futhi sike sahlala sonke ndawonye. Bayezwana futhi angiyiboni nakancane into engaba yinkinga ngokwenza umshado owodwa," kusho uNtombela
Ethintwa uNksz Dube okuzoqalwa ngaye, uthe akayiboni inkinga uma uNtombela ekhetha ukubahlanganisa ngoba vele bahlanganiswe wuthando. Utshele iphephandaba ukuthi yena noNtombela baqale ukuthandana ngo-2018, nokuyinto emjabulisayo ukuthi usethatha isinqumo sokwenza okufanele ngokuyovela kubo.
"Ngijabule kakhulu ngoba ukhombisa ukwethembeka nokugcina izethembiso zakhe ngalokhu akwenzayo. Mina nomnakwethu siyazwana futhi angisiboni isidingo sokuxabana ngoba sihlanganiswe ukuthanda umuntu oyedwa. Abesifazane baningi kabi kunamadoda futhi ukubambisana kuhle ngoba uzofinyelela yena lapho ngehluleke khona, " kusho uNksz Dube.
UNksz Chili owathandana noNtombela kusukela ngo-2012 uthe kuyathusa lokhu okuzokwenzeka kodwa ngakolunye uhlangothi kuyamjabulisa njengoba seyiminingi iminyaka bethandana. Uveze ukuthi yonke le minyaka bebevele bebonisana noNtombela ukuthi kufanele ayovela ekhaya kubo.
"Kunezinto ezibalulekile ebengivele ngizazi abesazilungisa nokwenza ngingamjahi kakhulu. Okunye ubenesifiso sokuqala akhe umuzi ube mkhulu ngendlela ezomenelisa naye ngaphambi kokuthi asilobole. Mina ngiyamthanda umnakwethu ngoba siyathobelana futhi sikwazile nokwakha ubungani sonke lesi sikhathi. Abantu sebeze basibiza ngamawele ngoba asihlukani uma sindawonye, " kusho uNksz Chili.
UNtombela uthe ziningi izinhlelo ezinhle anazo ngamakhosikazi akhe futhi uyawethemba ukuthi noma esevelile emakubo azoqhubeka nokuzwana njengoba nabantu abaningi sebewazi endaweni.